အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: September 2009
နွေ မိုး ဆောင်း ညောင်း
လွမ်းရတာတောင်ပြာဖွေးဖွေးနဲ့ . . .
တစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေ့ါဟာ . . .
Kunming and Yangon
Posted by တီချမ်း at 1:13 AM3comments: Links to this post
ကျမ နာမည် ကျန့် ဂျင်းနီပါ။ ဖေဖေ့ နာမည်နဲ့ မေမေ့ နာမည်တို့ကနေ တလုံးစီ ယူပြီးတော့ ဖြစ်လာတာပါ။ အဲ့ဒီအချိန်တုံးကတော့ ဖေဖေနဲ့မေမေ တို့ ဟာအရမ်း ကို ချစ်ကြည်နေခဲ့ကြတာပေါ့။ ကျမ ကြားဖူးတာက မိဘတွေ ချစ်ခင်မှု အားကောင်း နေတဲ့ အချိန်မှာ မွေးတဲ့ကလေးတွေ က ဥာဏ်ပိုကောင်းတတ်ကြတယ်တဲ့။ ကျမ က တခြား ကလေးတွေထက် ဥာဏ်ပိုကောင်းမကောင်း ကျမမသိပါဘူး။ အသက် ၁၆ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကျမ တချိန်လုံး ထူထူ ထုံထုံ နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုကလည်းနည်း၊ နေ့ရှိသ၍ စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်မက်နေတာနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်နေတာပါပဲ။ တဦးတည်းသော သမီး ဖြစ်လို့လားတော့မသိဘူး ကျမ က တယောက်တည်းနေရတာ ကိုအကျင့်ပါနေပြီ။ ပြီးတော့ အဲ့လို တယောက်တည်းနေရတာ ကိုလဲ ပိုကြိုက်တယ်။ တခါတခါတော့လဲ သူငယ်ချင်း တွေ ဘာတွေကိုတောင့်တမိပါရဲ့။ ငယ်ငယ်တုံးက ကျမ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိမဲ့ ဘမဲ့ နဲ့ မိဘမဲ့ ကလေးကျောင်းမှာ ကြီးပြင်းရတဲ့ ကလေးတယောက်အဖြစ် ခဏခဏ စိတ်ကူးယဉ် ကြည့် ဖူးတယ်။ ရွယ်တူမိဘမဲ့ ကလေးတွေ တပုံကြီးနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကစားလို့ပေါ့။ လွတ်လပ် ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝ အရသာကို ကောင်းကောင်းနားလည်ရင်းနဲ့လေ။ နောက် နည်းနည်းလေး ထပ် ကြီးလာပြန်တော့ ကျမ ရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်မှုတွေ က နည်းနည်းလေး ပြောင်းလဲလာ ပြန် တယ်။ ဥပမာ-ကျမက အရမ်းချမ်းသာကြတဲ့ သူဌေးကြီး တအိမ်ကအမွေစားအမွေခံ မိဘမဲ့ ကလေးပေါ့။ ကျမ အမေ က သူဌေးကြီး ရဲ့အမွေခံ တဦးတည်းသော သမီးပေါ့။ မေမေ ဆုံး သွားတဲ့ အခါကျတော့ ကျမ အတွက် သူ့ရဲ့ အမွေတွေတပုံတပင်ကြီး ချန်ထား ခဲ့တာလေ။ ကျမ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်တဲ့ အခါကျတော့ ကျမ သဘောရှိသုံးနိုင်တာပေါ့။ အင်း ကျမကတော့ အမွေတွေအကုန်လက်ထဲရောက်ရင် အရင်ဆုံး ကမ္ဘာပတ်မယ် စဉ်းစား ထားတယ်လေ။
ကျမ အိပ်ခန်းရဲ့နံရံပေါ်မှာ အရောင်စုံ ကမ္ဘာ့မြေပုံတချပ် ကပ်ထားတယ်။ ရုပ်ရှင် ကြေညာ အကြီးကြီး လေးခုစာလောက် ကိုကြီးတာ။ ဒီမြေပုံမှာ ဇာတ်လမ်း တပုဒ် ရှိတယ်။ ကျမ ရဲ့ စိတ်ထဲက တိတ်တိတ်လေးသိမ်းထားခဲ့တဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လေးတခုပေါ့။ အင်း… တနေ့နေ့ကျရင်တော့ ကျမ အဲ့ဒီလျှို့ဝှက်ချက်ကလေး ကိုတယောက်ယောက် ကိုများ ပြောပြဖြစ်မလား မပြောတတ်သေးဘူး။ ဒါပေမယ့် သေချာတယ် အသက် ၁၆ နှစ် အရွယ် မှာတော့မဟုတ်သေးဘူး။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ တခုခု ထူးခြားတဲ့ မြေပုံတချပ် ဆိုတာတော့ သေချာတယ်လေ။ တနိုင်ငံ နဲ့ တနိုင်ငံ အကြားမှာ သေသေချာချာ စည်းသားထားတဲ့ အစိမ်းရင့် ရောင် မျဉ်းတွေ မရှိဘဲနဲ့ ရေစိုရောင် နဲ့သာ တိမ်တိမ်လေး ခြားထားတာလေ။ ပင်လယ်ထဲ က ငါးမန်းတွေ၊ ဝေလငါးတွေ၊ ကမ္ဘာလိပ်တွေနဲ့ ပင်လယ်ဂဏန်းကြီးတွေ၊ ပြီးတော့ ကျောက်တောင် လှိုင်ဂူ တနေရာရာ မှာ ရှိနေမယ့် ကျောက်သံပတ္တမြားတွေ။ ဟော်လန် နိုင်ငံ ရဲ့ အထိမ်းအမှတ် က စက္ကူပန်ကာလေး၊ ဂျပန် က ဆာကူရာ လို့ခေါ်တဲ့ ချယ်ရီ ပန်း၊ ဗီယင်နာ က တယော၊ သြစတြီးယား ကသလင်းကျောက်၊ ပြင်သစ်က ရေမွှေးပုလင်း၊ အီတလီ ဖိနပ် ရဲ့ထိတ်ထောင့်စွန်းလေးက သံပြားနဲ့လုပ်ထားတာ၊ သြစတြေးလျ က ကိုအာလာ (koala) လို့ခေါ်တဲ့ သစ်ပင်ပေါ်မှာနေတဲ့ ဝက်ဝံတမျိုး၊ တရုတ်ပြည်က ပန်ဒါ ဝက်ဝံ၊ စပိန်က နည်းနည်းတုံးအအ ပုံပေါက်တဲ့ နွားရိုင်း တကောင် ၊ဆွတ်ဇ်ဇာလန် က ချောကလက်တပြား၊ ဂရိ က အမိုးဖြူဖြူနဲ့ အိမ်ပု ဝိုင်းလေးတွေ။
ကျမ အသက် ၁၆ နှစ်ပြည့်တဲ့ နှစ်က ၁၉၉၈ ခုနှစ်၊ အဲ့ဒီနှစ်က ဂျပန် ပြည် ကို ကျောင်းပိတ်ရက် အလည်သွားတဲ့ ကိစ္စ က ကပ်ရောဂါ တခုလိုပဲ ကျမတို့ ကို ကူးစက် လာပါတယ်။ ကျမလဲ တနေ့နေ့ ကျရင် အဲ့ဒီ နေရာ ကိုအလည်သွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ခဲ့ တာပေါ့။ ကျမ ဆုံးဖြတ်ထားတယ် ကျောင်းပြီးတာနဲ့ ပထမ ၅ နှစ် ကို လေယာဉ်မယ် လုပ်မယ်လို့၊ အဲ့တာဆိုရင် နေရာအနှံ့ လဲရောက်မယ် လေယာဉ်လက်မှတ် တွေလဲ ဈေး ပေါပေါနဲ့ရမယ်လေ။ အဲ့ဒီ ၅ နှစ်ပြီးမှတခြားအလုပ်တွေရှာလုပ်လဲ နောက်မကျပါဘူးနော့။
နောင်ကျောင်းပြီးရင် ခရီးသွားဖို့ ငွေစုလို့ရအောင် ကျမ ကျောင်းပိတ်ရက်တိုင်းနဲ့ တနင်္ဂနွေတွေတိုင်းမှာ ကျမ ဂျပန်စတိုင် ကိတ်မုန့်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတဆိုင်မှာ အချိန်ပို အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ကျမသိလာတာတခုက အဲ့ဒီ ဖြုတ်မျက်စိ လောက်ရှိတဲ့ အချိန်ပိုင်း လစာနဲ့ဆိုရင် ကျမ ခရီး ကိုခြေကျင်ထွက်ရလိမ့်မယ်။
ကျမနဲ့ အတူ ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ကောင်မလေး တယောက်လဲရှိပါသေးတယ်၊ သူမနာမည်က “အားရင်း” တဲ့။ သူမ နဲ့ ကျမ အသက်အရွယ် တူတူပါပဲ၊ သူမ က မိဘမဲ့ တယောက်ပါ၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်တုံးကမှ မိဘမဲ့ကျောင်းမှာ မနေခဲ့ရဘူး။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ခရီးတွေပြောင်းရွေ့နေထိုင်ကြတဲ့ လူမျိုးစုတွေလိုပဲ သူမ က အမျိုးတွေရဲ့အိမ်မှာ အလှည့် ကျ လိုက်နေနေရတာလေ။ သူမ က ပြည့်စုံကြွယ်ဝတဲ့ အိမ်ထောင်ကလာတဲ့ မိဘမဲ့ မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ တဘက်က အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့ငွေရှာပြီး ကျောင်းတက်ရတာပါ။
တနေ့ည….ဆိုင်ပိတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ အားရင်းနဲ့ ကျမ ရောင်းမကုန်လို့ကျန်နေတဲ့ ကိတ်မုန့်တွေထည့်ထားတဲ အမှိုက်အိတ် နှစ်အိတ် ကိုဆွဲပြီးတော့ အမှိုက်ပုံရှိရာ ကိုလျှောက်လာကြတယ်။ လျှောက်နေရင်းနဲ့ အားရင်းက ကျမ ကို သူ့ရဲ့အတွေးတွေ ပြောပြလာနေခဲ့တယ်လေ။
“ငါခဏခဏ စိတ်ကူးယဉ်ဖူးတယ်…အသက် ၁၈နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ကျရင် ထူးဆန်းတဲ့ လူ တယောက် ပေါ်လာပြီးတော့ ပိုက်ဆံတွေ တပုံကြီး ကိုအမွေဆက်ခံဖို့ ငါ့ကိုလာ အကြောင်း ကြားတာပေါ့ဟယ်။ တကယ်တန်းကျတော့ ငါက သိပ် ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ မိသားစု က မွေးဖွားလာတဲ့ မိဘမဲ့ ကလေး တယောက်ပေါ့။ ဒီလူကြီးက လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈ နှစ်လုံးလုံး ငါ့ ဖေဖေ မသေခင်က မှာသွားတဲ့အတိုင်း ငါ့ကို မတွေ့တွေ့အောင် လိုက်ရှာနေခဲ့တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် ငါကအမျိုးတွေအိမ်မှာလိုက်ပြီးနေရတော့ ခဏခဏ အိမ်ပြောင်းရတယ် မှလား။ အဲ့တာကြောင့် သူက ငါ့ကိုအဲ့လောက်နှစ်တွေအများကြီး ရှာမတွေ့ခဲ့တာပေါ့ဟယ်”….။
“အဲ့ အတိုင်းတကယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ နော်….”ကျမ ပြောရင်းနဲ့ အားရင်း ကိုမေးလိုက်တယ်….
“ပိုက်ဆံတွေ အဲ့လောက်အများကြီးရလာရင် နင်ဘယ်လို သုံးမယ်စိတ်ကူးထားလဲ?”
“ငါမစဉ်းစားထားဘူးဟ” ပြီးတော့ သူမက ကျမဘက်ကိုလှည့်လာပြီးမေးပါတယ်။
“ငါကတော့ ကမ္ဘာပတ်မှာ” ကျမ ချက်ချင်းမဆိုင်းမတုံ့ဘဲ ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။
“အေး ကောင်းတယ် တကယ်လို့ ငါအဲ့ဒီအမွေတွေ ရရင် နင့်ကို ကမ္ဘာပတ်ဖို့ ဒကာခံ ပေး မယ်” လို့ သူမက ရက်ရောစွာနဲ့ ပြောပါတယ်။
“ကောင်းတာပေါ့” ကျမ က လက်ထဲ က ကိတ်မုန့်တွေ ကိုအမှိုက်ပုံးထဲ လှမ်းပစ်ထည့်ရင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။
“ငါ ပထမဆုံး မိဘမဲ့ကလေးတွေ ကိုထားဖို့ကျောင်းကောင်းကောင်းလေး တဆောင် လောက် ဆောက်ပေးချင်တယ်ဟာ” အားရင်း ကအမှိုက်ပစ်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာ ကျမ ကိုပြောပါတယ်။
“ငါ့မေမေ ကျောင်းသူဘဝတုံးက တခါ မိဘမဲ့ကလေးကျောင်းမှာ တလလောက် လူမှု ဝန်ထမ်း သွားလုပ်ဖူးတယ်၊ မိဘမဲ့ကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ ကလေးတွေ ကို ပုံပြင် စာအုပ် တွေ ဖတ်ပြရတာပေါ့ဟာ။ မေမေပြောပြတာကတော့ အဲ့ဒီကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ ကောင်လေးတွေ ကောင်မလေးတွေ အားလုံးက လှကြတယ်တဲ့” ကျမ ကအားရင်း ကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်။
“အင်းလေ….ဟုတ်တာပေါ့ အဲ့ဒီမိဘမဲ့ကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ကလေးတွေအများစုဟာ များသောအားဖြင့် လှပပြီး အသိဥာဏ်မဲ့ မိန်းမလှငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့ ရုပ်ရည် ချောမော ခန့်ထည်တဲ့ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောက်ျားငယ်ငယ်လေးတွေ က မွေးပြီး ပစ်သွားကြတဲ့ ကလေးတွေများတာကိုး” အားရင်း ကထောက်ခံပြောပြောပါတယ်။
အားရင်း က တော်တော်လှပါတယ်။ သူမ မှာ အထီးကျန်ဆန်ပြီး ခတ်မှောင်မှောင် အေးစက်စက် ဖြစ်နေပေမယ့် ဝိုင်းစက်ပြီး လှပတဲ့သမင်မဆန်ဆန် မျက်လုံးတစုံ ရှိပါတယ်။
နောက်ပြီး ဒီလိုအေးစက်စက် မျက်လုံးလေးတွေနဲ့ ဘယ်လိုမှ မလိုက်ဖက်တဲ့ ခပ်ပြည့်ပြည့် နဲ့ လှပ ပြည့်စုံတဲ့ ရင်သားနှစ်မွှာ လည်းရှိပါတယ်။ သူမ အဖေ နဲ့ အမေဟာ လှပပြီး အသိဥာဏ်မဲ့ မိန်းမလှငယ်ငယ်လေး နဲ့ ရုပ်ရည် ချောမော ခန့်ထည်တဲ့ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ယောက်ျားငယ်ငယ်လေး လား ဒါမှ မဟုတ် ချမ်းသာတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းက သူဌေးသားနဲ့ သူ့ချစ်သူ မိန်းကလေးလားလို့ ကျမ အားရင်းကိုတခါမှမမေးဘူးပါဘူး။
“မိဘမဲ့ကျောင်းမှာ ရှိတဲ့ကလေးတွေ ကို ငါက ပထမတန်းစား အဆင့်မြင့် စောရ သူခိုးတွေ ဖြစ်လာအောင်သေချာ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရမယ်” လို့ အားရင်းကပြောပါတယ်။
“ဘာဖြစ်လို့ အဆင့်မြင့် စောရ သူခိုးလဲ” ကျမမေးလိုက်ပါတယ်။
“ဟဲ့ အဆင့်မြင့်စောရ သူခိုးနဲ့ မိဘမဲ့ ဆိုတာ တတွဲထဲလာတာလေ၊ ဘယ်လောက် romantic ဖြစ်သလဲ” လို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာ များလို့ ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေ တော်တော်နက်နက်လေး မိနေပုံရတဲ့ အားရင်း ကပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့်တကယ့်အဖြစ်အပျက်မှာတော့ လှပတဲ့မိဘမဲ့လေးအားရင်းက အဆင့်မြင့် စောရသူခိုးနဲ့ ချစ်ကြိုက်မနေပါဘူး။ အားရင်းရဲ့ ကောင်လေး “ရှောင်ဟွာ” က သူ့ထက် ၃လ လောက်ပဲကြီးပါတယ်။ သူမ ရဲ့ မူလတန်းကျောင်းကတည်းက ကျောင်းနေဖော် လေးပါ။ နောက်တော့ ရှောင်ဟွာ ကအနုပညာ တက္ကသိုလ် တက်ပြီးတော့ ဒီဇိုင်း ပညာကို သင်ယူ နေပါတယ်။ ကျမ ရှောင်ဟွာ ကိုမမြင်ဘူးပါဘူး။ အားရင်း ရဲ့အပြောကတော့ သူက ဇီးကွက် သေလို့ဝင်စားတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ညဘက်ဆိုမအိပ်တတ်လို့တဲ့လေ။
“ဒါပေမယ့် သူပုံဆွဲတာတော့ သိပ်တော်တယ်။ သိပ်လှတာပဲ” လို့ သူမက ပြောပါတယ်။ အားရင်းက တခါတလေ ကျမကို ရှောင်ဟွာအကြောင်းလေးတွေ ပြောပြတတ်ပါတယ်။
ရှောင်ဟွာ ပြီးရင် သူမ ကျမ ကိုပြောပြလေ့ရှိတာက “ဝက်ဝံ” ရဲ့အကြောင်းပါ၊ ဝက်ဝံ ကလဲ သူမနဲ့ ရှောင်ဟွာ တို့ရဲ့ မူလတန်း ကျောင်းကတည်းက သူငယ်ချင်းပါပဲ။
“အလယ်တန်း ၆တန်းကျောင်းသားဘဝ တုံးက ငါတို့တွေ ကျောင်းက လုပ်တဲ့ ပျော်ပွဲစားတခု တူတူထွက်ခဲ့ကြတယ်။ အဲ့ဒီတုန်းက ကျောင်းသားတွေ တစုတဝေးထဲ လယ်ကွင်းတွေဘေးကနေ ဖြတ်လျှောက်သွားကြတုံးကပေါ့၊ ရှောင်ဟွာ နဲ့ ဝက်ဝံ က အားလုံးရဲ့အရှေ့ဆုံးမှာ ကော့ကော့ ကော့ကော့ နဲ့လျှောက်နေခဲ့ကြတယ်လေ။ အဲ့ဒီ အချိန်မှာပဲ ရုတ်တရက် ဘယ်ကနေ တရှိန်ထိုး ပြေးထွက်လာမှန်းမသိတဲ့ အဝါရောင် နွားကြီးတကောင်က အဲ့တုံးက အနီရောင်တောက်တောက် ကိုဝတ်ထားတဲ့ ရှောင်ဟွာ ကို အတင်းဝင်ဝှေ့တော့တာပဲ။ ရှောင်ဟွာက လဲကြောက်အားလန့်အားနဲ့ အသက်လုပြီး အတင်းစွတ်ပြေးတော့တာပေါ့ အဲ့ဒီလို အားလုံး အော်ကြဟစ်ကြ နဲ့ပွက်လောရိုက်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ ဝက်ဝံ က ရှောင်ဟွာ ကိုယ်မှာ ဝတ်ထားတဲ့ အနီရောင် ပေါ်ဝတ် အင်္ကျီ ကို လုယူ ပြီးတော့ သူ့ခါးမှာ ချည်ပြီး ပြေးတော့တာပဲ။ ဟို နွားရူးကလည်း ချက်ချင်းလှည့်ပြီး ဝက်ဝံ ကိုလိုက်တော့တာပဲ” တနေ့မှာ အားရင်း က ကျမ ကို ပြောပြပါတယ်။
“အိုး…………” ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီလောက် တုံးအ တဲ့ လူမျိုး က ရှာမှရှားပဲလို့ကျမ တွေးနေမိပါတယ်။
“နောက်တော့ ကော အဲ့ဒီနွားရူး ဝက်ဝံ ကိုမှီ သွားလား?” ကျမ အားရင်းကို သိချင်လောကြီးနဲ့ မေးလိုက်ပါတယ်။
အားရင်း ကခေါင်း ကိုဖြေးဖြေးလေးခါရင်းနဲ့……
“ဘယ်မှီပါ့မလဲ ဝက်ဝံ က ငါတို့ကျောင်းရဲ့ လေဟုန်အပြေးသမား ဆိုတဲ့ နာမည် တလုံးနဲ့နေတာဟ၊ ကျောင်းပေါင်းစုံ ပြေးခုန်ပစ် ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ဆို မီတာ ၁၀၀၊ ၂၀၀ တာတိုပြေးပွဲတွေမှာ ကျောင်းအတွက် ဆုတံဆိပ်တွေ အမြဲယူပေးနေကြဟ။ အထူးသဖြင့် သူ့ရဲ့ ပေါင်တံတွေ က သိပ်ရှည်တယ်လေ။ သူ ၇လ သားအရွယ်ကတည်းက သူ့ဖေဖေ နဲ့ မေမေ က သူ့ ကို ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် “တိုင်းအဆင့် ဟောင်ကောင်ဖလား ကလေးများ အားယားမှောက် တွားသွားပြိုင်ပွဲ” တွေမှာ ဝင်ပြိုင်ခိုင်းနေပြီ။ အဲ့ဒီနေ့ ကဆိုရင်လဲ “တာ” လွှတ်အချက်ပေး မောင်းသံ မြည်တာ နဲ့ တပြိုင်နက် ပထမ ဆုံးတွားထွက်လာတာ သူပဲ ပေါ့။ တခြားပြိုင်ဘက် ကလေးတွေ ကို ဟိုးအဝေးမှာ အပြတ်အသတ် ဖြတ်ချန် ထားခဲ့ ပြီးတော့ နောက်ဆုံး ပထမ ပန်းဝင်ခဲ့တာပေါ့။”
“ နင်ပြောတာ “ပဉ္စမအကြိမ်မြောက်” နော်” ကျမ အားရင်းရဲ့ ပခုံး ကိုလှမ်းဆုပ်လိုက်ရင်း မေး လိုက်ပါတယ်။
“အင်း…… ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် ထင်တာပဲ။ ဘာလို့လဲ..?” သူမ ကအံအားသင့်သလို ပြန်မေးပါတယ်။
“ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး” ကျမ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။
“ပြီးတော့ သူက အရှေ့လေးကြိမ်က စံချိန်တွေ ကိုလဲချိုးခဲ့သေးတာလေ။ အဲ့တုံးက သတင်းစာတစောင်ကတောင် ပြိုင်ပွဲနောက်တနေ့ မှာ သူ့ ကို “ဟောင်ကောင် စူပါ ကလေးလေး” ဆိုပြီး ချီးမြှောက်တဲ့ သတင်းတပုဒ်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သေးတာလေ”
“ဝက်ဝံ ကတကယ့်ကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်လေးလေး တယောက်ဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့” ကျမ သဘောတကျ ရယ်ရင်း နဲ့ အားရင်း ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။
“ရှောင်ဟွာ ကကော အတူတူပဲလား?...”
“ရှောင်ဟွာ ကဘယ်တုံးကမှ သွက်လက်ပေါ့ပါးတဲ့ လူတယောက်ပုံစံမျိုးမဟုတ်ခဲ့ဘူး”
“အဲ့တာဆို နင်နဲ့ ရှောင်ဟွာ က ဘယ်တုံးက ဇာတ်လမ်း စခဲ့ကြတာလဲ?”
“အဲ့ဒီ ပျော်ပွဲစားထွက်ပြီး နောက်မကြာခင်မှာပဲ”
“ဟင် ဘာဖြစ်လို့ ရှောင်ဟွာနဲ့လဲ ဝက်ဝံ ကပိုသတ္တိ ရှိခဲ့တာမှလား?”
“ဟဲ့ ရှောင်ဟွာ က ပိုချောလို့ပေါ့ဟဲ့ ပြီးတော့ သူ့ပုံစံလေးကြည့်ရတာ ဂရုစိုက် စောင့် ရှောက်မှု လိုနေသလိုလိုပဲလေ”
“ဟင် အဲ့တာဆို ဝက်ဝံ ကတော်တော်ရုပ်ဆိုးလို့လား?”
“အဲ့လိုလဲ မဟုတ်ပါဘူးဟ….” အားရင်း ကမျက်မှောင်တချက်ကုတ်လိုက်ပြီး…
“ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ ဥပမာဟာ ငါက ကိတ်မုန့်ကြိုက်တယ် ဆိုပါတော့ သူက ဘီစကစ်ဖြစ်နေတယ်ဟ”
ခဏ ငြိမ်သွားပြီးမှ သူမက တခုခုကိုရုတ်တရက် တွေးမိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့….
“ကြည့်ရတာ ဝက်ဝံ ကတော့ ငါ့ကိုကြိုက်ခဲ့ဖူးလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟ”။
Posted by တီချမ်း at 1:57 AM5comments: Links to this post
၇ လစာ နောင်တ
သူ့အဖေ က ဘယ်သူဖြစ်မလဲပဲ….!@#$%^!!!!!!!!!!!!!!!!
အင်း တယောက်ယောက်တော့ မြန်မြန်ရှာမှပဲ…
ငါ့ရဲ့ နောက်ဆုံးရည်းစားက ဘယ်သူပါလိမ့်
ဟို အကောင်နဲ့ ဖြစ်တဲ့ ဟိုညကများလား
ငါကိုက အစွပ်မသုံးမိတာ မှားတာပဲ
HIV နဲ့ ကာလသားလဲ စစ်ရအုံးမယ်
New Era Hotel, Kunming, China
Posted by တီချမ်း at 6:13 PM 10 comments: Links to this post